गोपनीयता नीति – युरोप डेटिङ अनलाइन
हामी यो पनि निगरानी गर्छौं कि आगन्तुकहरू पहिलो वेबसाइटमा कहाँ जान्छन र कुन पृष्ठबाट तिनीहरूले छोड्छन्. हामी यो जानकारी गुमनाम राख्छौं र अन्य व्यक्तिगत जानकारीसँग लिङ्क गरिएको छैन, वेबसाइटहरूमा पोस्ट गरिएको जानकारी.
5) कुकीहरूको प्रयोग
stonesaudio.nl आगन्तुकहरूसँग कुकीहरू राख्छ. हामी प्रयोगकर्ताहरूले हाम्रो वेबसाइटमा भ्रमण गर्ने पृष्ठहरूको बारेमा जानकारी सङ्कलन गर्न यो गर्छौं, आगन्तुकहरू कति पटक फिर्ता आउँछन् भनेर ट्र्याक राख्न र वेबसाइटमा कुन पृष्ठहरूले राम्रो गरिरहेको छ भनेर हेर्न. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.
Daarnaast worden cookies, जाभास्क्रिप्ट र सम्भवतः वेब बीकनहरू यी पार्टीहरूको अभियानहरू कति प्रभावकारी छन् भनेर निगरानी गर्न प्रयोग गरिन्छ. stonesaudio.nl को कुकीहरूमा न त प्रभाव छ न त नियन्त्रण छ, हाम्रा विज्ञापनदाताहरूले प्रयोग गर्ने जाभास्क्रिप्ट र वेब बीकनहरू.
यी सबै पक्षहरूको आफ्नै गोपनीयता नीति छ र तिनीहरूको वेबसाइट र सम्बन्धित सेवाहरूको प्रयोगको लागि यो गोपनीयता नीति प्रयोग गर्दछ।. यी पक्षहरूले गोपनीयतासँग कसरी व्यवहार गर्छन् भन्ने बारे थप जानकारी यी पक्षहरूको वेबसाइटहरूमा फेला पार्न सकिन्छ.
9) विज्ञापनदाता/तेस्रो पक्षहरूको गोपनीयता नीति
यस वेबसाइटसँग सम्बन्धित हाम्रा विज्ञापनदाताहरू र तेस्रो पक्षहरूको गोपनीयता नीतिको बारेमा थप जानकारीको लागि, कृपया यी सम्बन्धित पार्टीहरूको वेबसाइटहरूमा जानुहोस्. stonesaudio.nl ले यी कुकीहरू र तेस्रो पक्षहरूले राखेका कुकीहरूको गोपनीयता नीतिलाई प्रभाव पार्न सक्दैन।. यी कुकीहरू stonesaudio.nl को गोपनीयता नीतिको दायरा बाहिर छन्.
10) Google बाट DART कुकी
Google को DART कुकीको प्रयोग, हाम्रो वेबसाइटमा विज्ञापन देखाउन अनुमति दिन्छ. थप रूपमा, यो कुकी अन्य वेबसाइटहरूमा विज्ञापनहरू देखाउन प्रयोग गरिन्छ. तपाईं अब DART कुकी प्रयोग नगर्ने छनौट गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं निम्न वेबसाइट भ्रमण गरेर यो गर्न सक्नुहुन्छ: डार्ट